Uhlobo lweAmazon ngokukhanya okwakhelwe-ngaphakathi, kubonakala ngathi akunakwenzeka ukuphucula i-Kindle [UHLAHLELO] | Iindaba zeGajethi
Xa imveliso intle kangangokuba ngaphandle kokulula ngokulula iyaqhubeka ukutyhubela iminyaka, umntu ucinga ukuba yeyona nto ilungileyo kukusebenzisa ubungakanani be: Ukuba iyasebenza, sukuyichukumisa. Kodwa iAmazon yinkampani eyingozi kwaye akathandi ukujonga.
Inkampani kaJeff Bezos 'ihlaziye i-Kindle yeAmazon eyisiseko ukongeza ukukhanya okudibeneyo, ukuphucula imveliso ebonakala ifanelekile kwiimpawu zayo. Sinezandla zethu kwaye okokuqala ngqa iAmazon Kindle ngokukhanya okuhlangeneyo, hlala nathi kwaye ufumanise ukuba kunjani kuhlalutyo lwethu oluneenkcukacha.
IAmazon iphakathi koluhlu lweemveliso zohlobo "olufikelelekayo", oko kukuthi, eyona modeli isisiseko esele ingaphezulu ngokwaneleyo kwaye inentabalala yokufa kwabantu abaqhelekileyo, yiyo loo nto iphakathi kwezona zithengiswa kakhulu kwinkampani yaseNyakatho Melika, kwaye asibasoli. Sikuzisa uhlobo kunye nokukhanya okudityanisiweyo okusandula ukumiliselwa nge-10 ka-Epreli ukuze ubone ngokweenkcukacha ukuba kufanelekile na ukutyala imali, nangona sele sinokukuxelela ukuba isishiyile incasa emnandi emlonyeni wakho, jonga Jonga kwi Akukho mveliso ifunyenweyo ukusuka kwi- € 89,99 nangona sicebisa ukuba uhlale uphaphile kwizibonelelo ezizayo.
1 Uyilo kunye nezixhobo: ezilungileyo ukuba zilula, ziphindwe kabini zilungile
2 Iimpawu zobugcisa: Ngaphezulu kokulingeneyo ukufunda ngaphandle kwemida
3 Ukukhanya kwangaphambili kunye nomsebenzisi
4 Ukuzimela kunye noluvo lomhleli
Uyilo kunye nezixhobo: ezilungileyo ukuba zilula, ziphindwe kabini zilungile
Sifumana isixhobo esenziwe nge-polycarbonate, iplastikhi yobomi bonke, oku kuyinika ukudibanisa kunye nokukhanya esingenakufumana kwezinye izixhobo ezifanayo, nangona abanye abasebenzisi beziva ngathi "yipremiyamu encinci". Akufanele silibale ukuba into esinayo yincwadi ye-elektroniki. Sinobunzima be Iigram ezili-174 kuphela zepaneli enesentimitha ezintandathu kunye nobukhulu obuchanekileyo be-160 x 113 x 8,7 millimeters, Kuyinto ebhityileyo, inesikrini esifanelekileyo kwaye ingena kamnandi esandleni, sinokufunda sisebenzisa enye yazo.
Ubunzima: I-174 gram
Ubungakanani: X x 160 113 8,7 mm
Ikhutshwe ngemibala emibini: Mnyama noMhlophe. Akukho ndawo apho siya kufumana amaqhosha, kuba inelinye ezantsi kuphela, ecaleni kwesinxibelelanisi se-microUSB (kutheni kungenayo i-USB-C ngokupheleleyo ngo-2019?) Oko kuya kusetyenziswa ukuyibiza. Eli qhosha liya kuba yinkqubo yokutshixa eya kubeka iscreen kwi-stand-by, kunye nokucima ngokupheleleyo, kuyo yonke enye kuya kufuneka sihambe ngokuchukumisa isikrini. Izakhelo zayo ezincinci ezigxininisiweyo zingaphezulu kokwaneleyo ukuphumla iminwe yesandla kwaye aziphazamisi indawo yokufunda, oku kuyabulelwa kakhulu.
Iimpawu zobugcisa: Ngaphezulu kokulingeneyo ukufunda ngaphandle kwemida
Njengoko besitshilo, sinescreen se ii-intshi ezintandathu ze-inki ye-elektroniki, Oku kuyasivumela ukuba singabinangqondo ngokoqobo phantsi kwayo nayiphi na imeko, kuyafana ngokufunda incwadi yesiko. Naxa sisebenzisa eyakho Ii-LED ze-4 zangaphambili Siza kuba nakho ukonwabela obu buchwephesha obuza kugcina amehlo ethu esempilweni kwaye ngaphezu kwako konke oko kungasidinisi nokuba sichitha iiyure esizichithe phambi kwayo, ulonwabo lwenene.
Isikrini: Iintshi ezi-6 kunye nesisombululo se-167 DPI
Ukukhanya okumanyeneyo okukhanya kwe-4-LED
Ukugcina: 4 GB
QAPHELA: Kwithiyori ineBluetooth kwaye oku kuchaziwe kwisikhokelo somsebenzisi, nangona kunjalo, kubonakala ngathi ayizukusebenza eSpain okwangoku.
Isisombululo sesikrini ziiphikseli ezili-167 nge-intshi nganye, singatsho ukuba ayonelanga okanye iphantse ukuba lusizi ukuba khange sithathele ingqalelo ukuba yincwadi ye-elektroniki, eyaneleyo okanye engaphezulu ngokwaneleyo. Umthamo wokugcina yi-4 GB engayi kwandiswa likhadi le-MicroSD okanye naluphi na uhlobo lwangaphandle lokugcina. Ukubeka kwiincwadi ezimbalwa siye saqonda ukuba siya kuba nokugcinwa okungange-3 GB nje ukuba sikhuphe iNkqubo yokuSebenza kwimemori. Mhlawumbi yinqaku ekufuneka siyithathele ingqalelo xa sigcina iincwadi ezininzi, into ebonakala ingeyomfuneko xa sijonga ukuba ngenxa yoqhagamshelo lwayo lwe-WiFi siyakuhlala sinazo kwilayibrari yethu yeAmazon.
Ukukhanya kwangaphambili kunye nomsebenzisi
IAmazon iyayazi indlela yokoyisa ngeNkqubo yokuSebenza, umzekelo luluhlu lweTV yoMlilo. Sinobuchule bokuchukumisa ekulula ukusebenziseka, obunomdla, ukushiyeka phakathi kokubongoza intshukumo kunye nokuba kuthatha ixesha elingakanani ukubonakala kwiscreen kuyabonakala, kodwa kuqhelekile kwi-inki ye-elektroniki. Sinokufikelela ngokukhawuleza kwithala leencwadi, uqhagamshelo oluzinzileyo lwe-WiFi kunye nokukwazi ukuthenga iincwadi ngokuthe ngqo kwiAmazon, Oko kufuneka siyiqwalasele kuphela njengoko kubonisiwe kwividiyo ehamba nolu hlalutyo.
Sinokukrwelela isicatshulwa, sikhangele amagama kunye neenkcazo, siguqulele ezinye esingazaziyo kwezinye iilwimi kwaye sihlengahlengise nobungakanani bokubhaliweyo, kuba oku kufuneka sisebenzise uhlobo lweziko lolawulo, oko kukuthi, thina asizukushiya iphepha ebesilifunda, nangona kunjalo, inkqubo yeebhukumaka ezenzekelayo iya kusikhumbuza ngephepha ebesikulo ngaphandle kobunzima obuninzi. Isibane esingaphambili sihlengahlengiswa kukukhanya, ngokuchanekileyo kwaye ngokuchanekileyo, esenza ukuba sikwazi ukufunda ebusuku ebhedini okanye kwiindawo ezimnyama ezinje ngeenqwelomoya kunye noololiwe ngaphandle kwesidingo sokuphazamisa nabani na okhanyise ngaphandle, oko kumnandi nje. Ukongeza, ukusetyenziswa kokukhanya akuhluphi amehlo konke konke ngokweemvavanyo zam.
Kananjalo, kungenjalo kungenjalo, IAmazon ibonelela ngesixa esikhulu sembozo kunye nezixhobo zeAmazon Kindle ngqo Akukho mveliso ifunyenweyo
Ukuzimela kunye noluvo lomhleli
IAmazon isithembisa malunga neeveki ezi-4, ithatha njengesalathiso sokufunda isiqingatha seyure ngemini ngonxibelelwano olungenacingo luqhawulwe kunye nokukhanya okusekwe kwinqanaba le-13. Ukusetyenziswa okuqhelekileyo okubandakanya uqhagamshelo lweWiFi olusebenzayo, ukufundwa okuphakathi nje kweyure kunye nokuqaqamba kwamandla aphezulu sikwazile ukufikelela kwiiveki ezimbini zokusebenzisa ngentlawulo enye, ke ngoko, ukuzimela (kuhlawuliswe ngokupheleleyo malunga neeyure ezintathu ngetshaja ye-5V 2A) kunokwanele ukufunda ngaphandle kokuba yingxaki. Kwakhona, ukuba sikude nekhaya kwaye sifuna ukusandisa sinokuthi sinciphise ukukhanya kwaye sisuse i-WiFi yokumisa idreyini.
Kukhululekile, ukukhanya kwaye ukumelana
Izibane zilungile kwaye azidinisi amehlo akho
IAmazon ihlala isungula ukubonelela ngexabiso eliphantsi
Inkqubo yokusebenza ilungile ukuba ifundwe ngaphandle kwemida
Sebenzisa intambo ye-microUSB endaweni ye-USB-C ngo-2019
Ayibandakanyi iadaptha yamandla
Kuya kufuneka uqhelane nonxibelelwano lomsebenzisi
Kubonakala ngathi kulungiso lwe-Kindle yeAmazon, ethathela ingqalelo ixabiso layo kwaye ayizange ihlaziywe ukusukela ngo-2016 Andinakukhetha ngaphandle kokucebisa oku Akukho mveliso ifunyenweyo ngaphambi kwenguqu yesiko ngaphandle kokukhanya okujikeleze i-euro ezilishumi ngaphantsi. Ukongeza, iAmazon ngokuqinisekileyo iya kugqibela ngokusungula izibonelelo ezenza ukuba esi sixhobo sibe semnandi kwiintsuku zamva nje, ke hlala ubukele.
Uhlobo lweAmazon ngokukhanya okwakhelwe-ngaphakathi
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Uhlobo lweAmazon ngokukhanya okuhlangeneyo, kubonakala ngathi akunakwenzeka ukuphucula i-Kindle [UHLAHLELO]
Uyithenga njani i-Kindle